RV Newsletter: Kendren’ity fehezampitaovana vaovao ity ny hanampy ny mpanao lahatsary hahatontosa fiantraikany lehibe kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2019 5:34 GMT
Naotin'ny Rising Voices: atolotr'ity taratasim-baovao avoakanay isa-tapabolana ity ny fehin'ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana miresaka ny fampiatiana nomerika izay mahatafiditra ny fahafaha-miditra sy ny fandraisana fitaovana nomerika, sy ireo fomba isankarazany ho an'ny vondrom-piarahamonina handray anjara feno antserasera. Vakio ato raha hijery ireo famoahana teo aloha amin'ity taratasim-baovao ity.
Amin'ny fanombohan'ireo lanonana mitranga amin'ny tanàndehibe miavaka any amin'ny faritra tahaka an'i Kuala Lumpur, Malayzia, sy i Manila, Filipina ary ireo hafa izay mbola ho avy, sy ny halavantanan'ny media sosialy, dia naseho ho hitam-bahoaka vao haingana amin'ny fomba ofisialy ny fehezam-pitaovana lahatsary ho amin'ny fiantraikam-piovana.
Ity fitaovana antserasera novokarin'ny fikambanana Engage Media niaraha-niombonana antoka tamin'ny Video4Change Network ity no manolotra amin'ireo mpanao lahatsary manam-pitaovana, fomba tsara indrindra ary torohay amin'ny “fomba mety sy mahomby hananganana lahatsary mahomby sy mampiditra ny mpijery ho mpitondra fiovana.”
Fizarana sasantsasany amin'ny fehezam-pitaovana ny Fikarohana sy Famolavolana, Fanaovana Filma sy Famokarana, ary ny Fampielezana sy Firotsahana. Hita ao amin'ny fizarana tsirairay ny tetipanorona, sy ireo angon-doharano hanaovana vakinteny bebe kokoa. Miangavy mba jereo ity lahatsary manaraka ity hahitanao torohay bebe kokoa momba ny fehezam-pitaovana.
Amin'ity lohahevitra ity, tianay ny hihaonanareo amin'ny vahiny roa vao haingana nitantana ny tetikasam-pifandimbiasana kaonty Twitter momba ny fahavitrihana nomerika (@DigiAfricanLang)! Tianay ny hisaotra an'i Adebayo Adegbembo tamin'ny nizarany ny asany momba ny fiteny Yoruba sy i Mama A. Nii Owoo momba ny asany amin'ny fiteny Gã. Miangavy anao hamaky ny lahatsoratra fanontaniana sy valiny momba azy ireo sy ny asany avy, efa voadika amin'ny teny malagasy daholo ireo!
Mbola momba ity lohahevitra ity ihany, tianay ny mampahafantatra anao amin'ireo vahiny roa mitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas — ny mpikatroka nomerika fitenin-janatany Kiado Cruz (Zapotec avy any Santa Cruz Yagavila, Oaxaca, Meksika) sy i Netzahualcóyotl López (Mixtec avy ao Yucuhiti, Oaxaca, Meksika). Ao amin'ny lahatsoratra momba azy ireo, izay samy efa voadika ihany koa amin'ny teny malagasy, ianao no hahafantatra bebe kokoa ny momba azy ireo sy ny asany amin'ny fameloma-maso indray sy ny fampiroboroboana ny fitenin-janatany niaviany.
Ankilan'ny ezaka fahavitrihana nomerika ataonay manodidina ny fiteny, dia tianay ihany koa ianao hitamberina kely any amin'ny taona 2017, tamin'ny fomba niarahan'ny vondrom-piarahamonina sasany ao Colombia sy ny fanorenana asa nataon-dry zareo hampifanohy ny lalana amin'ny “hantsana nomerika” misy eo amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra sy ireo ao an-tanàndehibe sy ny fanolorantenan'ny vehivavy ao amin'izany tetikasam-piarahamonina izany. → “Tsy afa-mipetraka sy miandry fotsiny izahay…” [efa voadiaka amin'ny teny malagasy ihany koa]
Screen Australia — sampandraharahan'ny governemanta Aostraliana misahana ny fananganana-fampivelarana, ny famokarana ary ny fampiroboroboana ny efijery — no manana programam-pamatsiana dia ary ahitana famatsiam-bola vitsivitsy amin'ny alalan'ny departemanta tompontany. Aboriginal azo fidiana amin'izany na mponin'ny nosy andilan-dranomasin'i Torres te-hivoatra ho matihanina: miangavy hamarino ato izany ar jereo sao mahazo tombontsoa avy amin'izany famatsiambola izany ianao.
Hampiantrano ny Vovonana 2019 ny Global Voices Azia Pasifika [mg] (ny voalohany indrindra hatramin'izay) ny ekipan'ny GV ao Azia ary hotontosaina any Taipei, Taiwan izany. Mpanao gazety ve ianao, bilaogera, mpikatroka nomerika sy/na mpikaroka miraharaha ny amin'ny fanamby ara-politika sy ara-teknika antrehintsika sy ny fiantraikany ao amin'ny tontolon'ny aterineto? Miangady misorata anarana ato ary tongava ao amin'ny andro voalohany natao ho an'ny rehetra! Daty: 2 Jona 2019 @ NTU Institute of Applied Mechanics [Ivontoeran'ny Mekanika Nampiharina]
Namoaka vavahadim-pikarohana Search vaovao ny Creative Commons ahafahana mahita votoaty azon'ny rehetra ampiasaina sy asa manana lisansa CC azo alaina maimaimpoana ao amin'ny aterineto. Hanandrana?
Fiarahamiasa, Fahazoamiserasera, ary ny Fizakantena via the Internet Society
Forum WSIS 2019 mamehy miaraka amin'ny fanasongadinan'ny fandraisana anjaran'ny fahaizana voatr'olombelona amin'ny fampandrosoana lovainjafy via UNESCO
Tendron'Antsy: ny filma amin'ny fiteny izay 20 monja no miteny azy via BBC
Taona Iraisampirenena teny tompontany 2019 via SADiLaR (South African Centre for Digital Language Resources)
Ny aterineto miadam-pandeha indrindra manerantany no tsy mora vidy indrindra avy amin'ny Tatitry ny Mozilla amin'ny Fahasalamàn'ny aterineto taona 2019